OB / GYN Columbus, OH Dr. Lauren Sagaria
Lauren Sagaria, MD
La kulan Dr. Lauren Sagaria
Lauren Sagaria, MD waxay ku biirtay Xirfadlaha Caafimaadka Haweenka Ogosto 2020 kadib markay dhammeystirtay degenaanshaha OB / GYN ee Summa Health System ee Akron, OH. Waxay heshay tababar ku saabsan umulinta caadiga ah iyo halista sare, qalliinka dumarka ee robotka iyo qatarta ah, hysteroscopy, iyo daryeelka kahortagga.
Dr. Sagaria waxay dhigatay jaamacada Ohio State University halkaas oo ay ku qaadatay shahaadada Molecular Genetics. Kadib waxay ka heshay dhakhaatiirta caafimaadka ee Northeast Ohio Medical University.
Wuxuu ku dhashay Dayton, Ohio Dr. Sagaria wuxuu hada ku nool yahay Dublin, Ohio. Iyadu waa orodyahan aad u jecel, iyada oo dhammaystiray tartamo badan oo maaratoon ah. Waxay kaloo ka heshaa tolnimada iyo dubista.
Dr. Sagaria wuxuu u qaadaa qaab naxariis leh bixinta daryeelka kahortaga, qaliinka qalliinka haweenka ee ugu yar, iyo dhalmada caadiga ah iyo kuwa halista badan leh.